Gabar la sheegay in Muqdisho laga afduubey oo hadashay | KEYDMEDIA ONLINE
Gabar la sheegay in Muqdisho laga afduubey oo hadashay
Cismaan Cali Hudeey, taliyaha booliska Guriceel ayaa sheegay in markii ay wareysteen gabadha ay xaqiiqsadeen inay rabitaankeeda ku socotay, oo ay kusii jeeday ehelkeeda oo ku nool degmada.
GURICEEL, Soomaaliya - Hibo Maxamed Xasan, oo maalmo kahor waalidkeeda shaaciyeen in laga afduubey Muqdisho, ayaa lagu qabtey Shalay degmada Guriceel, ee gobolka Galgaduud iyadoo gaari saaran.
Saldhiga ayaa la geeyay, waxaana wareystay taliyaha booliska, Cismaan Cali Hudeey kaasoo sheegay in gabadhan oo 16-18 jir ah ay uga soo baxdey Muqdisho si iskeedda ah, iyadoo aysan ogeysiin waalidiinteeda.
Hibo ayaa sidoo kale afkeeda ka caddeysay inuusan jirin qof soo afduubey ama qasab uga soo kaxeystay Muqdisho, oo ay ku noolayd, waxayna intaasi ku dartay inay usoo dhuumatay ehelkeeda oo degan Guriceel.
Sheekadda gabadhan ayaa qabsadey mudo labo maalmood ah baraha bulshadda, iyadoo aad loo hadal hayay in la afduubey, laakiin aysan taasi noqotay, waxaana hadda cabsida ay daysay labadeeda waalid iyo qoyskeeda, oo markii hore ka welwelsanaa xaaladda ay ku sugan tahay.
0 Comments Topics: booliska galgaduud galmudug guriceel